एनआईसी एसियाले झण्डै २ अर्ब लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं– एनआईसी एसिया बैंक लि.ले चुक्ता पूँजीको २१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालको अध्यक्षतामा शुक्रवार राजधानीमा सम्पन्न २२औं वार्षिक साधारण सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
साधारणसभाले चुक्ता पूँजीको २१.०५२६ प्रतिशत अर्थात् रु. १ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख ३७ हजार ६ सय एक्काइस (रु.१,८५,९८,३७,६२१) लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
जसमध्ये १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ८८ करोड ३४ लाख २२ हजार ८ सय सत्तरी (रु. ८८,३४,२२,८७०) बोनस शेयर र ११.०५२६ प्रतिशत हुन आउने रु. ९७ करोड ६४ लाख १४ हजार ७ सय ५१ (रु. ९७,६४,१४,७५१) नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ समेत) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
साधारणसभाले बैंकको पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । यसबाट बैंकको चुक्ता पूँजी रु ९ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख ५१ हजार ५ सय ६८ पुगेको छ ।
एनआईसी एसियाले आफ्नो बैंकमा डीम्याट खाता हुने शेयरधनीलाई आजकै मितिबाट नगद लाभांश भुक्तानी गर्न शुरू गरिसकिएको तथा डीम्याट खाता नहुने शेयरधनीलाई यथाशीघ्र डीम्याट खाताका लागि बैंकको शेयर रजिष्ट्रार एनआईसी एसिया क्यापिटल तथा बैंकको नजिकैको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यस बैंकको मुलुकभर ३०१ शाखा कार्यालय, ३६२ एटीएम, ७० वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ४१ वटा शाखारहित बैंकिङमार्फत् बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनआईसी एसिया देशकै सबैभन्दा ठूला शाखा सञ्जाल भएको बैंक समेत हो ।
नेपाल एसबिआई बैंकले १७ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं र मोरङमा लक्ष्मी बैंकको शाखा विस्तार
कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह, कम उमेरको अधिकांश विवाह भागेर ! सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्र्तगत स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले गरेको एक अध्ययनमा यस्तो पाइइएक...
विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने सांसद साहको सेवासुविधा रोकियो
राष्ट्रपति भण्डारी राजकीय भ्रमणका लागि म्यान्मार प्रस्थान
दुई अर्ब लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गरिँदै
विवेकशील अध्यक्षमा पाण्डे निर्वाचित, आगामी निर्वाचनमा जोड रहने प्रतिबद्धता